Home Wararka Jubaland oo taageertay go’aankii Rooble, eedeyna u jeedisay Francisco Madeira
Jubaland oo taageertay go’aankii Rooble, eedeyna u jeedisay Francisco Madeira
Jubaland ayaa taageertay go’aankii Ra’iisul Wasaare Rooble ku eryay Wakiilka Midowga Afrika Francisco Madeira.
Qoraalka ka soo baxay Madaxtooyada Jubaland ayaa lagu sheegay in dowlada Jubaland soo dhawaynayso go’aanka Xukuumada Federaalka Soomaaliya ka gaartay Danjiraha Midowga Afrika Francisco Madeira.
Jubaland waxay tilmaantay in Madeira uu si dulaalnimo ah uga dhex shaqaynayay siyaasadda gudaha ee dalka, isagoo ku milmay xadhig jiidka siyaasada ee ka dhexeeya dadka Soomaaliyeed, uuna qayb ka ahaa khilaafyadii dowladda federaalka iyo Jubaland. Sidoo kale waxay sheegtay in uu ka horyimid heshiiskii dowlada Jubaland iyo siyaasyiintii tabashada ka qabay doorashadii 2019ka ee Jubaland.
Waxay kaloo ku eedeysay inuu in mudo ah ka caga jiidayay howlgalada ay qaadi jireen ciidamada AMISOM, uuna meelo badan oo dalka kamid ahna ka saaray ciidamadii joogay si ay dib ugu qabsadaan Al-shabaab.
Ugu dambeyntii Jubaland waxay sheegtay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu wakiil u yahah shacabka Soomaaliyeed, inta lagu guda jiro xiligan kala guurka ah.
Previous articleXog: Xubno ku jira Liiska Cunaqabteynta US oo ay MOL ogaatay.
Next articleHir-Shabeelle oo maanta diiwaangelinaya musharixiinta u tartameysa HOP#024, HOP#106 & HOP#140
Ku Tartanka Beenta Shacabka loo Sheego ee Farmajo, Kheyre iyo ...
Puntland oo diiday in Cali gacal casir ka qeeyb-galo Shir...